झुठको खेती… मिडियाको कि श्वेताको ? - Sidha News
हिन्दीमा एउटा कहावत छ- ‘प्यार किया को डरना क्या… !’ प्यार गर्ने, घुमघाम गर्ने, हाँसो–ठट्टा गर्ने र यहाँसम्म कि विवाह बन्धनसम्मको यात्रा पूरा गर्ने तर त्यही कुरा जानकारी पाएर मिडियाले खुलासा गरिदिँदा नानाथरि बहाना पारेर ‘यो गलत हल्ला मात्र हो, यस्तो हल्ला गर्नेलाई साइबर क्राइमको मुद्दा हाल्छु’ भन्दै धम्की दिने काम समेत गरियो । तर.. अन्ततः समाचार सत्य नै रहेछ ! अब मुद्दा नै हाल्ने हो भने कसले कसलाई चाहिँ हाल्ने हो ? रोचक सन्दर्भ पैदा भएको छ ।
आफूलाई सार्वजनिक ब्यक्तित्व या सेलिब्रेटी ठान्ने अनि सेलिब्रेटीको हरेक क्रियाकलाप वा गतिविधिलाई मिडिया र दर्शकहरूले चासो राख्छन्, जान्न खोज्छन् भन्ने तथ्य मान्न तयार नहुने ! एक चर्चित सेलिब्रेटी भएर पनि मिडियाविरुद्ध नकारात्मक टीका-टिप्पणी र हल्ला गरेर हिँड्नु कति लज्जास्पद कुरा हो ! सेलिब्रेटीलाई यस्तो गर्न सुहाउँथ्यो त ? तर, यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण सन्दर्भ बन्न पुग्यो अभिनेत्री श्वेता खड्काको ब्यवहारबारे ।
केही समयअगाडि मिडियाले श्वेता र उनीभन्दा ८ वर्ष उमेर कम भएका धनगढी निवासी विजयेन्द्र सिंह रावतसँग विवाह हुने कुरा लेखेपछि श्वेता तीन बित्ता माथि उफ्रेर यो कुरालाई मिथ्या भनेर भन्दै हिँडेकी थिइन्, तर आज यही कुरा सत्य सावित भएको छ र, श्वेता मंसिर २२ गते दोस्रो पटक विवाह बन्धनमा बाँधिदै छिन् । झुठको खेती मिडियाले कि श्वेता, कसले गरेको रहेछ, अब पर्गेल्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाली सिनेमा र सामाजिक क्षेत्रमा एउटा अलग नाम बनाएकी श्वेता, तर मिडिया र दर्शकबीच अविश्वासको खाडल गहिरो नै पारेको छ यस सन्दर्भले । कसैसँग जीवन जिउने कुरालाई छल्न खोज्दै ‘ए.. हो र मलाई त थाहा नै छैन’ भनेर अस्वीकार गर्ने श्वेताको आगामी बोली र ब्यवहारलाई अब मिडिया र दर्शकहरूले कसरी विश्वास गर्ने ? विवाहको विषयलाई लिएर उनले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सही या गलत जे भए पनि बोल्नु हुँदैनथ्यो, त्यो नै श्वेताको लागि महानता हुन्थ्यो । तर पहिला गलत भन्ने र अहिले त्यही कुरा सही निस्कँदा उनले कमाएको सामाजिक प्रतिष्ठा अनि शान-मानमा कतै ठेस त लागेन ?
समाजसेवी, शालीन र भद्र नारीको रूपमा श्वेतालाई हेर्ने नजरहरूले आगामी दिनमा उनको कुन कुरामाथि विश्वास गर्ने त ? तपाईंजस्तो चलेकी सेलिब्रेटीको हरेक क्रियाकलापको चासो मिडिया र दर्शकहरूमा हुनु अस्वाभाविक पनि होइन, र त्यही कुरालाई मिडियाले एक माध्यम हुनुको नाताले तपाईंका फ्यानहरूसमक्ष पुर्‍याएका मात्र हुन् । यदि तपाईं सिनेमा क्षेत्रमा नआएको र जन्मघर काभ्रेको खोपासीमा बसिरहेको भए को श्वेता र को सेलिब्रिटी ? कसले चासो दिन्थ्यो र ! तपाईं आफैं भन्नुस् त !
सेलिब्रेटी भएपछि त्यसको उचाई, शान र मान राख्न सक्नुपर्छ । बजारमा आएका कुरालाई तपाईंले गहन रूपले सोचेर त्यसलाई पहाड बनाउँदा अन्ततः घाटा तपाईंलाई नै हो । करोडौँ दर्शकका प्रिय अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठकै नामले तपाईं श्वेतालाई पछिसम्म चिनिरहने छन् र, हामी पनि हजुरमा त्यही शालिनता र भद्रता चाहन्छौँ । तपाईं आज समाचारको विषय बन्नुभएको छ अनि चर्चा-परिचर्चा पाउनुभएको छ त श्रीकृष्णजीकै नामबाट पाउनुभएको छ । यो कुरा जीवनभर हजुरले भुल्न हुँदैन र हजुरजस्तो शालिन महिलाले यो कुरा मनन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीमा छ । अन्त्यमा तपाईंलाई यो दोस्रो विवाहको शुभकामना…!!!-राजन घिमिरे